Google Duo na-aga n'ihu ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ ma melite ndị adịlarị | Gam akporosis
Google Duo bu Google nzọ iji kpọọ oku vidiyo site na nọmba ekwentị, n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ na-eme ma ọ bụ na-anabata ha. Fewbọchị ole na ole gara aga, ọ gbasaa ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị sonyere ruo 12, n'otu ụzọ ahụ na-achọ ime WhatsApp.
Mana enwere ike ịkpọ oku na mmadụ iri na abụọ, Ọ bụghị naanị ihe ọhụụ nke Google zubere ịgbakwunye. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke amalitela itinye na ngalaba nkesa, anyị na-ahụ ya na ọ ga-ekwe omume ịse foto ndị niile sonyere na oku ahụ.
Iji jiri ọrụ a, anyị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ Duet Moments na ntọala ngwa, ọrụ nke a ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ niile bụ akụkụ nke oku vidiyo. Ọrụ ndị ọzọ Google kwupụtara ga-abịa n'oge na-adịghị anya achọtara na enwere ike ịzọpụta video ozi zitere site na nke a ngwa iji zere na ndị a na-apụ n'anya mgbe awa 24 si na mbupu ha.
Ihe ohuru ohuru, ma obu ihe na-adighi nma maka ya, di na vidiyo. Mgbe ịgbatị karịa ịgba ndị sonyere na 12, Google kpebiri iji AV1 vidiyo codec, koodu nke ahụ awade mma arụmọrụ na ngwa ngwa njikọ ma nke ahụ na-erikwa obere data.
Oku vidiyo abụrụla n'oge a na-egbochi ndị ọzọ nanị otu ụzọ iji nwee ike nọgide na-ele ndị ọzọ anya nke na-adịghị ebi n'ụlọ anyị, ọ ga-abụ na ha ga-anọgide na-eji ọtụtụ ebe n'ọdịnihu mgbe ihe a niile mere, ugbu a na ọtụtụ ndị ọrụ ejirila usoro a nke nkwukọrịta dị ka otu ọzọ kwa ụbọchị, ma ọ bụghị naanị n'ọrụ, kamakwa kwa ụbọchị, ndụ nke ọtụtụ ezinụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Duo na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ ma melite ndị dị adị